Kuchenesa kwemadhora | Ehupfumi Zvemari
Zvinoenderana neazvino dhata kubva kuBhangi yeSpain, avhareji purofiti yemabhangi yakaramba ichiderera panguva ya2017 kusvika yasvika nyowani yose-nguva yakaderera pa0,08%. Iko kuti, 0,02 muzana inonongedza zvishoma pane zvine chekuita nemwedzi wapfuura. Nei maitiro mukubatsira kwemabhengi emari achiri kudzikira? Ndechipi chichava chinoitika mukubatsira kwemabhangi akachengetwa mu2018? Iyi ingori mimwe yemibvunzo iri kubvunzwa nevamwe vevashandisi panguva ino.
Asi pane chimwe chinhu chaungangodaro usina kumbofunga nezvacho. Uye ndiyo iyo inoenderana nekudiwa kwemari pane imwe nguva mukudyara kwako. Wakatarisana nekudiwa kwekutarisana neimwe mari isingatarisirwi, teerera kodzero dzako dzemutero kana kungoti kuripa chimwe chikwereti. Muzviitiko izvi, chii chaizvo chinoitika kana uine yako mari yakachengetwa mune imwe nguva dhipoziti? Zvakanaka, iwe unofanirwa kutarisisa nekuti iwe unogona kuve neanopfuura imwe dambudziko kuitira kurongeka kweichi chiitiko.
Kubva pane ino yakajairika mamiriro, iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unogona kudzoreredza iyo mari kubva kumatemu dhipoziti. Asi vanogona kunge vakataura zvirango zvinofamba mumatanho anoenda kubva 1% kusvika 3%, pane purofiti inowanikwa. Izvi mukuita zvinogona kureva kuti harisi basa rinobatsira nekuti mutengo waunogona kuva wakakodzera kwazvo. Ehezve, mamiriro ezvinhu aunofanira kufunga usati wahaya chigadzirwa ichi kuchengetedza. Chinhu chisingawanzo kuitika muzviito nevatengi vebhangi.
1 Ko zvakadiniko nezvikwereti?
2 Kusarura uye zvachose kuregererwa
3 Hapana zvirango kana makomisheni
4 Zvirango zvinokanganisa sei?
5 Sarudza mapfupi mapfupi
6 Zano pamusoro pekudzima
Ko zvakadiniko nezvikwereti?
Ehe saizvozvo pane mamwe makesi akasarudzika. Sezvazviri nemadipoziti emhando, ndiko kuti iwe hauna kupa mari, kana zvisiri, pane kudaro, vanokupa iwe nezvakasiyana mhando. Zvakanaka, zviri mune aya mamodheru ekuchengetedza uko iwe uchave nekusahadzika kukuru nekubviswa kweichi chigadzirwa chebhangi. Ehezve, mune ino mamiriro haugone kudzikinura iyo mari. Iwe hauzove neimwe mhinduro kunze kwekumirira kupera kwayo uye nekuzvipa iwe kuti uwane mari yekugadzirisa mari yauchazosangana nayo kubva ipapo zvichienda mberi.
Mupfungwa iyi, iyi kirasi yezvimiro yakafanana zvikuru neya advance payment kana kugadzirwa pakutanga kwekugadzwa kwayo. Muzviitiko izvi, iwe haugone kuita kununura chero kana mune yakanakisa kesi ivo vanozozvitora pane mabhenefiti akagadzirwa kusvika panguva iyoyo. Chero zvazvingaitika, iwo anonetsa mamodheru uye uchafanirwa kutarisira izvo zvinogona kuitika nemari yako. Nekuti usazeze, iwe unogona kuve nezvinopfuura zvinopfuura kushamisika kwakashata kubva panguva yaunoshandirwa.
Kusarura uye zvachose kuregererwa
Mumwe mamiriro anogona kupokana ndeekuti iwe unogona kuita zvishoma kana zvachose kununura pasina chero rudzi rwezvirango uye mari mukutarisira kwayo. Nekudaro, zvakajairika kuti kana iwe ukaita oparesheni iyi hapana chaunogona kuita kunze kweku kutaurirana purofiti yemutero wakanyorerwa. Uye zvirokwazvo neicho chimbadzo chidiki pane pakutanga. Nedonhwe remashoma gumi egumi muzana zvichienzaniswa neyekutanga chikumbiro. Iko mune zviitiko zvese iwe ucharasikirwa nekuti muhoro wako unenge wakadzikira kupfuura pakutanga. Kusvika pakuti ivo vachapa iyo shoma kudzoka.
Rimwe rematambudziko nekushandisa zano iri nderekuti pakupedzisira uchawana mari shoma, muchigadzirwa chebhengi chakatodzikiswa. Semhedzisiro yekuti parizvino mutengo wemari mudunhu reyuro uri pa0%. Ndokunge, iwe uchasvika pamhedziso yekuti hazvina kukodzera kunyorera kune ichi chigadzirwa chebhangi chemari dzakaderera kudaro mumubhadharo. Kusvika pakuti iwe unogona kurasikirwa nesimba rekutenga nekuda kwekuwedzera kwemutengo wehupenyu kunoonekwa mumitengo yevatengi index, inonyatso kuzivikanwa seIPC.
Hapana zvirango kana makomisheni
Kune rimwe divi, kune mamwe mamodheru ekuchengetedza anobvuma izvi mukana. Ndokureva, iwe unogona kuita kusarudzika kana kukwana kuregererwa kuburikidza nenguva yemadhipoziti ekunyorera Asi pasi pemamiriro akati wandei kuti iwe uzive kubva panguva yekutanga. Nekuti pakati pezvimwe zvikonzero, zano rekushambadzira iro ravachashanda kwauri kubva panguva yekutanga richava rekukupa iwe mubairo wakaderera pane uya wekutanga wakabvumirana paunenge uchisaina mutero. Asi uine chokwadi chekuti hauzoshandisirwe chero rudzi rwezvirango chero nguva. Ese mukomisheni fomati kana sevamwe manejimendi mari.
Ehezve, ichi chichava chakanakira sarudzo yezvaunofarira nekuti hauzorasikirwi nemari mukuita. Asi, kufamba uku kunobva pakuti iwe une mukwikwidzi wemari yemubereko wakaderera pane pakutanga. Ndokunge, ichatora mashoma ma euro kubva kune yega yega mashandiro eaya maitiro. Asi zvirinani kuti unogona kudzima dhipoziti ine zvivimbiso zvakakura kutarisana nemamiriro ezvinhu emvura anomuka kubva zvino zvichienda mberi. Iyo ndeimwe yemhinduro diki dzakashata dzauinadzo izvozvi.
Zvirango zvinokanganisa sei?
Chimwe chezvinhu zvaunofanira kuongorora nezverudzi urwu mafambiro mukuchengetedza mashandisiro anoita izvi zvirango zvichakukanganisa kubva ikozvino. Huye, aya makomisheni haazoshandiswe kune iyo huwandu hwese hwekuchengetedza. Ehe kwete, asi zvinozoitwa pane iro guru ndicho chinhu chekutanga kudzimiswa. Nepo kune rimwe divi, hazvizokanganisa iyo nguva yese yekugara kwekumanikidzirwa. Zvakapesana neizvozvo, ichave iri pane iyo nguva inosanganisira kukanzura uye kupera kwayo. Iyo yasara haifanire kuchinjwa kana iwe ukasarudza kukanzura ichi chigadzirwa kuitira kuchengetedza.
Mupfungwa iyi, zvakakosha kuti izwi rakasarudzwa rekugara chii. Nekuti zvirokwazvo, zvinogona kudaro 3, 6, 12, 24 kana kunyange yakawanda mwedzi. Iko kusinga gare kune mhedzisiro yakafanana kune tsananguro dzakapihwa pamusoro. Hazvishamise kuti kudzimwa kwemutero wepfupi-nguva hakuna kufanana neiya inopa nguva dzinopfuura mwedzi makumi maviri. Kusiyana kwavo muhuwandu hwechimbadzo hwavanokupa kuchasiyana zvakanyanya. Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti kana izwi richireba, ndipo paunonyanya kuomerwa nekuita basa iri.
Sarudza mapfupi mapfupi
Kana iwe usiri kuda kuve nezvinetso zvakawandisa nerudzi urwu rwechigadzirwa, zvichave zvirinani kuti iwe usarudze iyo ipfupi mazwi mumusika. Uye zvakare, mutsauko mukuita purofiti haungave wakakura kwazvo nezvipiwa zvinopihwa nemasangano emari panguva ino. Iwe unozomira chete kugamuchira mashoma egumi ezana muzana pasi. Asi nerubatsiro rukuru rwekuti mune zvese zvingangoitika haufanire kuita chero kukanzura. Kana zvishoma kana zvizere, saka hauzove nezvirango kana makomisheni. Ehezve, panguva ino zvichave zvakakodzera kusarudza zano iri mukuchengetedza.
Kune rimwe divi, zvichave zvakakosha kuti iwe uongorore kuti zvinobatsira here kana kuti kwete kubhadhara komisheni iyi, nekuti chokwadi ichi chiitiko chekuverenga chinokupa tora chikamu chikuru cheicho chakashambadzirwa pakutanga. Kunyangwe kana iwe ukasarudza akareba mazwi, iwe uchagara uine njodzi yakakomba yekuti ungangoda mari yekubhadharira chikoro chevana, zvako mutero zvisungo kana chero chero chikwereti chakasarudzika pamberi pevatatu. Neicho pakupedzisira iwe unenge usina imwe mhinduro kunze kwekudhonza iyo yakaunganidzwa chengetedzo kuburikidza netemu dhipoziti. Nezve izvo pakupedzisira zvaucharasikirwa nesimba rekutenga mukugadzwa kwechiitiko ichi chatiri kutaura nezvacho muchinyorwa chino.
Zano pamusoro pekudzima
Kana iwe uchida kukwidziridza kufamba uku kuchazoratidzwa mune yako mari chirevo, hapana zvirinani pane kuendesa yakateedzana yezviito nongedzo. Kusvika padanho rekuti zvichazobatsira kwazvo kana uri mushandisi wenguva dzose werudzi urwu rwezvigadzirwa zvebhengi. Semuenzaniso, mune dzinotevera kesi dzatinokufumura pazasi.
Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chaizvo mamiriro angave ekuchengetedza kwako kana vaifanira kununura.
Ziva kuti ndeapi mazwi anoisa izvo vangave kana kwete ivo vanobvuma kukanzurwa kwayo, uye kunyanya pasi pemamiriro api ezvinhu zvaizoitwa zviri pamutemo.
Koshesa iyo nguva dzakatarwa dzakakunakira iwe kutarisana nemamiriro ezvinhu emari inodikanwa uye ayo anowanzo kukanganisa mazwi mapfupi, pazasi pemwedzi mitanhatu.
El njodzi yekuti iwe unogona kubvumirana kana iwe ukanyorera chimwe chezvinhu izvi zvemabhangi. Kubva pakuona kwekuti iwe unogona kuvanunura mune isiri kure kure ramangwana.
Kana zviri nyore kuti iwe usarudze vamwe mhando dzinochinja-chinja dzekudyara izvo zvinokutendera iwe kuti udzore mari yacho pasina chero mhando matambudziko. Semuenzaniso, mari yekudyara, zvese zvakagadziriswa uye zvinoshanduka mari.
Zvibvunze pachako kuti pamwe purofiti yakaziviswa nemasangano ekubhengi Hazvisi izvo pakupedzisira zvauchazochaja. Asi ichave iri shoma mari uye ichaita kuti iwe unetseke kana zviri nyore kuti iwe usayine kontrakiti iyi kubva zvino zvichienda mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Kanzura mari
Chii chinonzi ngozi yekutanga?